Mary's Farm, ikhaya lezwe eduze kwaseWingham - I-Airbnb
Mary's Farm, ikhaya lezwe eduze kwaseWingham
Wingham, Ontario, i-Canada
Indawo esepulazini ibungazwe ngu-Sarah
Siyakwamukela ku-Mary's Farm! Buyela emuva ngesikhathi njengoba ungena emnyango, kusukela kusithombe sangemuva ukuya emibhedeni yakudala. Kuyikhaya elilula elinegumbi lokuhlala elinethezekile, ikhishi, igumbi lokugezela eligcwele, futhi lihlanganisa i-TV ne-Wi-Fi. Phuma ngaphandle ukuze uthole ukubukwa okuhle nendawo eningi ukuze ujabulele ngaphandle. Ukuhamba kulo mgwaqo ongemuva kunikeza ukuzivocavoca nokubukwa okuhle kunoma iyiphi isizini! Ukuqashwa kobusuku obubodwa kungase kutholakale uma kuceliwe futhi ngenani eliphakeme. Bona okuningi ku-Facebook naku-Instagram @marysfarmwingham.
Igumbi lokuphumula elibanzi kanye negumbi lokulala eliphakeme litholakala esitezi esikhulu negumbi lokugezela, ikhishi kanye nehhovisi elihlukile. Ikhishi linezisekelo zokupheka. Amakamelo okulala engeziwe anemibhede ephindwe kabili asesitezi sesibili.
4.68 · 80 okushiwo abanye
I-Mary's Farm itholakala ezweni elinamagquma namahlathi emvelo amaningi. Amaqabunga ekwindla mahle. Jabulela ukuvakasha kwemibala njengoba ushayela uya eMary's Farm futhi ngaphakathi nasezindaweni ezizungezile. Ezivakashini zasebusika, isendleleni yemoto yeqhwa. I-Snowshoeing kuwumsebenzi omuhle kakhulu ongawenza endaweni.
I am a farmer's wife and a teacher. We have four kids and enjoy being involved in their activities in the community and working with them on the farm.
Ababungazi bahlala eduze futhi bazophendula yonke imibuzo onayo. Singatholakala njengoba kudingeka, noma sikunikeze isikhala ukuze ujabulele ukuhlala kwakho ngaphandle kokusebenzelana. Uma kukhona okudingekayo ngokuhlala kwakho, yazisa ababungazi, futhi bazokwenza abangakwenza ukuze baqiniseke ukuthi ikhona.
Ababungazi bahlala eduze futhi bazophendula yonke imibuzo onayo. Singatholakala njengoba kudingeka, noma sikunikeze isikhala ukuze ujabulele ukuhlala kwakho ngaphandle kokusebenzel…